Anyone can sing | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Anyone can sing
Posted by pooch on Sep 20, 2012 in Creative Writing, Entertainment, Music | 65 comments
ဒီရက်ပိုင်း မှာ K-Wave လို့ တင်စားကြတဲ့
ကိုရီးယားရဲ့ အနုပညာလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုက အတော်လေးကို
အဟုန်ပြင်းလာတာတွေ့မိတယ်။ လတ်တလော အနောက်ကမ္ဘာမှာပါ hit ဖြစ်သွားတဲ့
Psy ရဲ့ Gangnam style သီချင်းကို ဂီတကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်တဲ့
Chris Brown အစ Taylor Swift အလယ် Britney အဆုံး အစရှိတဲ့
သူတွေတောင် မလွန်ဆန်နိုင်ကြရှာပါဘူး ။
၂၀၁၂ ရဲ့ MTV ဆုပေးပွဲမှာ အုတ်အော်သောင်းနင်း အားပေးကြပါတယ်။
ကြည့်ရတာ Wonder Girl ရဲ့ Nobody But You ဆိုတဲ့
သီချင်းထက်တောင် ပေါက်သွားပုံရပါတယ်။ စလုံးကလည်း Gangnam style ကို
မလေးကလည်း မလေးအလျောက် ထိုင်ဝမ်ကလည်း ထိုင်ဝမ်အလျောက် ပြန်ပြီး ဆိုကြပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာတောင် ထွန်းထွန်းက အဲ့ဒီ စတိုင်အတိုင်း ကနေတဲ့
Youtube movie လေး ကြည့်လိုက်ရပါသေးတယ်။
မြန်မာစာပေါက်ကရ အသံထွက်တွေနဲ့ ဟာသလုပ်ထားတဲ့ Gangnam style ကလည်း ခါတော်မှီပါ။
ကျမအဲ့ဒီ Psy ဆိုတဲ့ သူကို ရင်းနှီးမိတာကတော့
ခုလောလောဆယ်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ Superstar K-4 ဆိုတဲ့
အမှန်က Psy ထက် ကျမကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်တာက အဲ့ဒီ ပြိုင်ပွဲပါ။
American Idol လိုမျိုး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အနုပညာရှင်
ရွက်ပုန်းသီးလေးတွေကို မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှီ ပြိုင်ပွဲတခုပါ။
ခုဆိုရင် ၄ ကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲပါ။
ဆုကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သိန်းအထိပေးတဲ့
ပွဲဖြစ်သလို စ်ိတ်လှုပ်ရှားစရာ ထူးခြားမှုတွေ အံ့အားသင့်စရာ
စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ နှလုံးသားဝိဥာဉ်တွေကို ကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူတချို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို တောက်ပစေတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်တွေ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို
ရှင်သန်ထမြောက်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ပွဲဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကျမက ဒီ Superstar K ကို များမကြာမှီမှာ
American Idol ကို အမှီလိုက်လာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူက ပိုပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားတယ်လို့ ခံစားမိလို့ပါ။
K -1 ကစလိုက်တာ ခု4ရောက်တဲ့အထိ သူ့ကြည့်နှုန်းက နှစ်စဉ်
ကြောက်ခမန်းလိလိတက်လာပါတယ်။ စပွန်ဆာတွေ အများကြီးနဲ့ငွေသားအပြင်
တခြားသောဆုတွေကလည်း မက်မောလောက်စရာ ပါ။
K က အရှေ့က နေကျော်ပြီး အနောက်ကမ္ဘာကိုသွားနှိုးပါတယ်။
ဒါနဲ့တင် အားမရသေးပဲ အာရပ်ကမ္ဘာကိုတောင် အလည်ရောက်လို့သွားပါပြီ။
သူတို့ရဲ့ ပထမအဆင့် လူရွေးပွဲကို ပြည်နယ်အလိုက် ခွဲပြီး လုပ်ပေးပါတယ်။
ခုလက်ရှိနာမည်ကြီး အရည်အချင်းပြည့်သော ၀ါရင့်သမ္ဘာရင့် ဂီတအမျိုးအစားအလိုက်
နယ်ပယ်အသီးသီးက ပရိုသမားတွေကို ဒိုင်အဖြစ်ခေါ်ပြီး လူစစ်တာပါ။
ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းတွေ တင်းကျပ်သလို တကယ်အရည်အချင်းရှိသူများကိုသာ
မျက်နှာမလိုက် စစ်ထုတ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒိုင်တွေပါ။
Super Week ကိုတက်လှမ်းနိုင်ရင်တော့ အိမ်မက်တချို့ မက်လို့ရပါပြီ။
ဒီတခေါက် ပထမအဆင့်လူရွေးပွဲက ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှကြည့်ဖြစ်တာလေးပါ။ တယောက်က အသက် ၇၉ နှစ်ရှိတဲ့ နယ်ကလာတဲ့ အဖိုးအိုတယောက်ပါ။
Rapper စတိုင် အကျီ င်္ဘောင်းဘီ ဦးထုပ် ၀တ်လာပြီး တကိုယ်တော် ချီတက်လာတာပါ။
သူဝင်မပြိုင်ခင် အိမ်က ဖွားဖွားကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူခုဝင်သွားရတော့မယ်
ငါတော့ နာမည်ကြီးတော့မယ်လို့ ပြောပြီး ပျော်ပျော်ကြီး ၀င်သွားပါတယ်။
ဒိုင်တွေခုံက ထပြီး အလေးပြုရတဲ့ တယောက်ထဲသောပြိုင်ပွဲဝင်သူဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ သူတို့ဆီကခေတ်ဦး Rap သီချင်းကို အကနဲ့တွဲပြီး အဆိုပြိုင်သွားတဲ့ အဖိုးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ
ကြည့်သူတွေကို လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး အားပေးချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒိုင်တွေက အကျပေးပြီး အိမ်ပြန်အဖွားနဲ့ အချိန်ပေးပြီး ပျော်ပျော်နေပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူကလည်း မချင့်မရဲနဲ့ပဲ ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တယောက် က တော့ သူ့ရဲ့ တဦးတည်းသောသား အော်တစ်ဇင်
ရောဂါသည်ကလေး (လူပျိုပေါက်အရွယ်)အတွက် လာပြိုင်တဲ့ ၅၄ နှစ်အရွယ် ဖခင်တဦးပါ။
သူဆေးသုတ်တဲ့နေရာကို သူ့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့သွားပြီး တကိုယ်တော်ဆေးသုတ်လေ့ရှိသလို
ဆေးမသုတ်တတ်ပေမဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ကောင်းကောင်းကူသိမ်းပေးတတ်ပါတယ်။
သူတို့သားအဖတွေအားလပ်ချိန်မှာ ဂီတကို မျှဝေခံစားတတ်ပြီး သူသီချင်းဆိုတာကို
သူ့သားက နှစ်သက်တဲ့အတွက် သူ့သားရဲ့ ဘ၀မှာ အမြဲအမှတ်ရစေမဲ့ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့
ပြိုင်ပွဲဝင်သွားတဲ့ သီချင်းက ဒိုင်တွေကို ငြိမ်ကျသွားအောင် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဆိုပြသွားနိုင်သလို
သူ့သားလေးအတွက်ပါ လက်ဆောင်အကျီ င်္ပေးလိုက်တဲ့အထိပါ။
super week ကို တက်သွားပါတယ်။ အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ သူ့မိန်းမနဲ့သားလေးရဲ့ ဟန်ပန်က မြင်ရသူကို ၀မ်းနည်းဝမ်းသာပါ။
နောက်အဖွဲ့က ၃ ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့လေးပါ။
အဲ့ဒီထဲက တယောက်က မွေးကတည်းက အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့ သူတယောက်ပါ။
အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ် သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ကြုံရာ ကျပန်း အလုပ်များကို လုပ်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့ သူက သူ့ဘ၀ထဲမှာ ဂီတကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အချိန်က စပြီး သူ့ဘ၀က အဓိပ္ပါယ်ရှိလာသလို ခံစားရတယ် ။
အသက်ဝင်လာပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ သူက ဂီတကနေ သူ့ဘ၀ကို ရှာဖွေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ၀င်ပြိုင်တဲ့သီချင်းက 2AM အဖွဲ့ ရဲ့ This Song ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။
အဲ့ဒီသီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ပါးပါးလေးနဲ့ ထိထိရှရှဖွဲ့ထားပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်သက်လို့ မကြာမကြာနားထောင်မိတဲ့ သီချင်းပါ။
သီချင်းဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုတဲ့သူရော ဒိုင်တွေပါ မျက်ရည်ကျပြီး မှ အအောင်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ၂ ယောက်အဖွဲ့ကထဲက တယောက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဆိုဘာမှ အသုံးကျသူမဟုတ်ဖူးလို့ မိတ်ဆက်ပါတယ်။ လက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာ ဆေးမင်ကြောင်အပြည့်ထိုးထားပြီး
၀နေတဲ့ခန္ဓာ မျက်လုံးမှေးမှေးနဲ့ အသက် ၃၀ ထိရောက်နေတာတောင်
ဘ၀မှာ ပညာရေးကစလို့ ဘာတခုမှ ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂီတနဲ့တွေ့ချိန်မှာတော့ သူ့ကိုယ်သူရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောတဲ့
သူက Rap စာသားတွေ ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျရွတ်လို့ Super Week ကိုတက်သွားပါတယ်။
နောက်တယောက်က တော့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးပါ။
သူက သူများတွေထက် ပိုသေးပိုညက်သလို အရပ်လည်း ပုပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုကို အမြဲခံရလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ထက်သာတာတခုခု လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီး ဂီတကို လိုက်စားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ သူ့ဂစ်တာသံကို ကြားတဲ့ဒိုင်တွေ မေးပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
Super Week ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး တက်သွားနိုင်တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘက စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက် လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ
ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုပြီး စရိတ်ရှာလို့ ကျောင်းတက်နေတဲ့သူပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀ကို လိုချင်သူ အောင်မြင်ချင်သူရဲ့လက်သံ ဆိုဟန်တွေက ပရိုတယောက်နဲ့ နင်လားငါလားပါ။
သူလည်း Pass ပါ။
နောက်တယောက်ကတော့ အွန်လိုင်းကနေ အသံစစ်ပြီးမှ လူတွေ့ပဏာမကို တက်လာတဲ့
အာရပ်တိုင်းပြည်က ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတယောက်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စကား အလွန်ကောင်းပြီး ကိုးရီးယားသီချင်းနဲ့ စကားကို ဆရာမပါပဲ ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့
သူ့ရဲ့ လေယူလေသိမ်းနဲ့ ဆိုဟန်က ဒိုင်တွေကို ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တယောက်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လောက်က ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး
အေဂျင်စီနဲ့ ပြသာနာတက်လို့ နေရပ်ကိုပြန်သွားပြီး မိသားစုစီးပွားရေး
အကျပ်အတည်းကို ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ တကျော့ပြန်အဆိုတော်ဟောင်းတယောက်ပါ။
သူ့ကို ဘယ်အေဂျင်စီကမှ လက်မခံတော့တဲ့အတွက် သူမရဲ့ ဂီတဘ၀ကို တကျော့ပြန်အသစ်က စချင်သူတယောက်ပါ။
တင်းကျပ်လှတဲ့ ဒိုင်တွေကြားကနေ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်တယောက်က ဆိုးလ်မြို့တော်ကြီးကို ခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့ တောကနေ တက်လာတဲ့
မျက်နှာတခုလုံးကို ဆုရရင် ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သူပါ။
တောကလာလို့ စကားဝဲပေမဲ့ ၀င်ပြိုင်တဲ့ သီချင်းက အင်္ဂလိပ်သီချင်းပါ။
အသံ အားကောင်းပြီး ပွဲစဉ်တလျောက် ပြိုင်ဘက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မဲ့သူလို့ ကျမတော့ ခံစားမိပါတယ်။
ပီိယာနိုကို ၄ နှစ်သားထဲက စတီးပြီး ခု ၁၅ နှစ်သားမှာ Mozart (မိုးစက်),
Beethoven (ဘီသိုဗင် )စတဲ့ တေးသွားတွေကို အရည်ကျိုသောက်ထားနိုင်တဲ့ ကလေးတယောက်ပါ။
အသံရော အတီးရော နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီကလေးဟာ လောကကို ဂီတနဲ့ အလှဆင်
ဖန်တီးပေးဖို့ ရောက်လာသူတယောက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
နောက်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့သူတွေအတွက် တပ်ထဲမှာလည်း လူရွေးပွဲလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ။
သူတို့ ဆီက စစ်မှုထမ်းသက်က ၂ နှစ်ပါ။
စစ်ထဲ ၀င်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ အမေလုပ်သူက ကင်ဆာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်လိုက်ရတဲ့အတွက်
ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ သားတယောက်အနေနဲ့ ရှိနေပေးမနေနိုင်တာမို့
ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေ အားပေးချင်တဲ့ အမေ့သားတစ်ယောက်ရယ် ချစ်သူကို သေခွဲခွဲလိုက်ရတဲ့ အတွက်
ဘ၀ခြားသွားသူကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး သီချင်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ရယ်ကတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
သူတို့ ၂ ယောက်လုံး အောင်သွားပါတယ်။ တခြားအတော်များများလည်း အောင်သွားပါတယ်။
ပွဲက အခုမှ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်ရွေးရမဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ခုလာမဲ့ ရက်မှာအနောက်ကမ္ဘာ အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်တော်များများက
လူပေါင်း သန်းချီရွေးတဲ့ပွဲမို့ ပွဲစဉ်ပေါင်းများစွာကို စောင့်ကြည့် ရင်ခုန်ရအုန်းမှာပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ၀ါသနာရှင် ရွက်ပုန်းသီးလေးများကိုလည်း အခါအခွင့်ကြုံရင် ဒီလိုပွဲမျိုး ၀င်နွှဲစေချင်လှပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Superstar K-3 မှာ ပထမချိတ်သွားတဲ့အဖွဲ့က Ulala Session ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ပါ။
အဲ့ဒီ ထဲက အဖွဲ့ဝင်တယောက်က အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရပြီး စပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်က စလို့ ပွဲစဉ်တလျောက်လုံးမှာ
ဆေးရုံတက်ခွဲစိတ်လိုက် ဆင်းလိုက် ပြိုင်ပွဲဝင်လိုက်နဲ့ သေမင်းကို ကြံ့ကြံ့ခံ အန်တုပြီး အနိုင်ယူခဲ့သူပါ။
ခေါင်းတုံးဆံပင်နဲ့ ဆေးဒဏ်တွေနဲ့ဖြူဖျော့နေတဲ့ ကြားက
စံတင်လောက်တဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို လုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ အဖွဲ့က ပွဲစဉ်တလျောက်လုံး ကြည့်သူတွေအားလုံးကို ပေးသွားတဲ့အရာက
ရှောင်လွဲမရနိုင်တဲ့ သေမင်းကို အန်တုနိုင်ဖို့ လူကလည်း
ဘယ်လိုကြိုးစားရင်ဆိုင်နေထိုင်ရမယ် ဆိုတာရယ်၊ ဘ၀ကို ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရယ် ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်လူရွေးပွဲပြီးတော့ Psy ကပြောပါတယ်။
သူတို့ တိုင်းပြည်က တကယ့်ကိုပဲ Music Country ပါတဲ့။
ဘာလို့များ အဲ့လောက် ဂီတကို ခုံမင်ရူးသွပ်ပြီး တော်တဲ့သူတွေအများကြီး ရှိနိုင်ရတာလဲ မသိပါဘူး။
သူပြောမယ် မော်ကြွားမယ် ဆိုလည်း ပြောချင်စရာပါ။
K-wave အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ တစထက်တစ များလာပါတယ်။
SM, JYP, YG, CUBE စတဲ့ အန်တာတိန်းမန့် အေဂျင်စီတွေက
စနစ်တကျ မွေးထုတ်ထားတဲ့ အနုပညာ သည်တွေ အုပ်စုလိုက်ရော
တကိုယ်တော်ရော မနည်းလှပါဘူး။ လျော့သွားတယ် မရှိ တိုးလာတာပဲ ရှိပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မရိုးနိုင်သော ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အသစ်အသစ်သော ကကွက်တွေ သံစဉ်အသစ်တွေကို
ဂီတလောကရဲ့ ဆာလောင်မှုတွေကို ရှာဖွေပြီး
ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်များကလည်း အင်နဲ့အားနဲ့ပါ။
K-wave ကနေ ရလာတဲ့ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အကျိုး အမြတ်တွေ
မသိလိုက်မသိဖာသာနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးသွားမှုတွေဟာ ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလှတဲ့
ကျွန်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အသီးအပွင့်တွေပါ ။
ကျမဖတ်ဖူးတာကတော့ အနုပညာသည်တွေရဲ့ အိုင်ကျူဟာ တခြားသော
သူများထက်စာရင် နည်းနည်းလေးတော့ မြင့်လေ့ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။
အနုပညာသည်ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် ဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေ
ဈာန်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ သူမတူအောင် ဖမ်းစားတတ်တာကိုး ။
ဆိုတော့ ဒီကျွန်းက လူတွေ အိုင်ကျုတွေလည်း ကောင်းပုံရပါတယ်။ အထင်ပါ။
ဟိုဘက်အိမ် ပြတင်းပေါက်ကို ချောင်းကြည့်ပြီးတဲ့သကာလ ကိုယ့်အိမ်လေးကို ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ ၀ါသနာတွေ ပါရမီတွေ အိမ်မက်တွေ မျှော်လင့်ခြင်းတွေက်ို
ရှင်သန်ထမြောက်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ( ဂျုးစကားကို ငှားပြောရရင်)
ကြွယ်ဝတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခု ကျမတို့ ဆီမှာ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။
ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ လူတချို့အတွက် ထွက်ပေါက်လေးတွေ အလင်းရောင်လေးတွေနဲ့တောင် လမ်းမပြနိုင်သေးပါဘူး။
K-Wave ဆိုတာ အပေါ်ယံထက်ပိုပြီး ဟိုးအတွင်းနက်နက်ထဲထိ ကြည့်လိုက်ရင်
သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အနှစ်သာရကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထက်ပိုပြီး ကျော်ကြည့်လိုက်ရင် လူတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ
အကန့်သတ်မဲ့ပြီး ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ပေါက်မြောက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာလေးပါ။
Everyone can sing except me လို့သာ ပြောပါရစေ။
ဟို ဂီရိဖွတ်ကျား သာ တွေ့ရင်တော့ မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်ပြီး ကွန့်မြူးဦးတော့ မယ် ထင်ရဲ့ (သေချာပါတယ် ) သမီးရေ။
ညနက်ကြီး ထိ ရေးတင်နေ တာလား။
Good Night!!! :-)
lose sleep ဖြစ်နေလို့ပါ အရီး ။ အိမ်မက်ထဲကနေ တရေးနိုးလာတာပါ။
အရီးက except me လို့ ပြောရင် အနော်ကလည်း me too လို့ ပြောပါရစေ .
K-Wave ကို ကြည့်ရှု့ခံစားပြီး ကျကျနနတင်ပြထားလို့ ….
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်တောင် အဲလို ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အကန့်သတ်မဲ့ပြီး ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ပေါက်မြောက်သွားနိုင်တယ်
ဆိုတာလေးကို အားရပါးရ ထောက်ခံသွားပါတယ်။
ကြွယ်ဝတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရာမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအပြင် စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းမှာပါ အများကြီး လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
ကျော်ဟိန်းစကားနဲ့ နောက် ၁၀နှစ် ၁၀နှစ် လို့ပဲ ပြောရမလား။
သဂျီးစကားနဲ့ နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာလို့ပဲ ပြောရမလား။ :eee:
မမရေ ၁၀ နှစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ တသက် မြန်မာတပြည်လုံး လျှပ်စစ်မီးရပြီး အင်တာနက်သုံးနိုင်ရင်ပဲ သေပျော်ပြီလို့ ဆိုရမလားမသိပါဘူး။
“K-Wave ဆိုတာ အပေါ်ယံထက်ပိုပြီး ဟိုးအတွင်းနက်နက်ထဲထိ ကြည့်လိုက်ရင်
သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု”. Like it ! If we want to be like them, We must have same amount of enthusiasm & hardworking what they have ! Right?
oh! you got what i mean . yes, absolutely right..
အသံသွင်းပြီး.. ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာတင်.. ဆုပေးပေ့ါ..
တချို့ကိစ္စတွေက.. သိပ်ကြီးနက်နက် မတွေးပါနဲ့..
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး.. ထလုပ်လိုက်… :hee:
သဂျီး အဲဒီ အရုတ်လေးတွေ ဘယ်လိုထဲ့ ရလဲ့ ပြောပြပါ လား?
ဗျို့ သူကြီး ပွဲနာမည်က Superstar K ပါ ။ ကိုရီးယားရဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးများ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပါ။ K-Wave ဆိုတာ ကိုရီးယားရဲ့ ရုပ်ရှင် ဂီတ variety show စတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက အရာတွေကို စုပြီး K-Wave ကိုရီးယား အနုပညာလှိုင်းဆိုပြီး ပေါင်းစပ်ပြီး တင်စားခေါ်ကြတာပါ။
M-wave ကို စတင်နိုင်ဖို့ ငွေကြေး အရင်းအနှီး လိုတာမို့ ခုလို သူကြီး ဆီမှာ
K-Wave ဆန်ဆန် M-wave ရှိပါတယ်…သူကြီး…လူရွေးပွဲမှာ ဟို Foreigner ကြီး judge
လုပ်တဲ့ အများသိကြတဲ့ Channel7ကလွှင့်ခဲ့တဲ့ ‘အိပ်မက်ဆုံရာ’ Season-2 ပြိုင်ပွဲပါ..
ကျန်တဲ့ ပုံမှန်လွှင့်နေကျ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေထက် သီချင်းအမျိုးအစားစုံစုံ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်
ရတဲ့ပွဲမို့ သာလွန်ပြီး ကြိုက်ပါတယ်…. Season-1 တုန်းကထက် Seanson-2ကို
လူတွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးကြပါတယ်…(၁၉.၉.၂၀၁၂၊ ကြေးမုံ သတင်းစာ
စာ-၇ မှာတောင် ရေးထားသေးတယ်(မဖတ်လိုက်ရသူများတွက်)…
ပြိုင်ပွဲဝင် ၈ယောက်ကလည်း season 1 ၁၀ယောက်ထက် အဆိုပိုတော်သလား
အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲထဲက ရဲသွေးနောင်ဆိုတာ အနော့အကြိုက်၊အသည်းစွဲပါ….
အတော်ကြိုက်ကြတဲ့ မြင်ဖူးသမျှထဲ စော်အကြည်ဆုံး တက်သစ်စ အနုပညာရှင်ပါ…
…သူရို့အားနဲ့ popular choice award ရခဲ့တာထင်ပ..အနော့ ပံ့ပိုးမှုလည်း
……..အယောက် ၅၀ လူရွေးပွဲကတည်းက သူ့ကိုပဲ တစ်ပေးခဲ့တာပါ……
သူက အသံရော..သီဆိုဟန်ရော လုံးဝ perfect ….သူသာ လူ၅၀ ရွေးပွဲတုန်းကလို ယုံကြည်မှုအပြည့်၊ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြည့်၊performance အပြည့်နဲ့ ပြိုင်ခဲ့ရင်
သေချာပေါက် ပထမရမှာပါ…..popular choice award တွက် ၃သိန်း၊mobile
application က ၃သိန်း၊တတိယဆု ၅သိန်း..ရခဲ့တယ်..သူက တတိယပဲ ရခဲ့ပေမယ့်
သူ့အသံက အကောင်းဆုံးပါ……ပထမဆု ၅သိန်းထက် ၂ဆနဲ့ဆုငွေလည်း
အများဆုံး သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သူပါ..ပြီးရင် အိဖြူသိမ့်..အဲ့ ၂ယောက်က နဂိုအသံကိုက
လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ အားစိုက်စရာမလိုဘဲ အေးဆေးဆိုနိုင်ပြီး ကောင်းနေလို့ကို
ကြိုက်တာပါ….လိုအပ်ချက်တွေ Call Center ဖုန်းဆက်ပြောချင်ပေမယ့် မပြောရဲလို့
:grin: အဓိကဆုကြေးငွေတွေကတော့ အတော်နည်းနေသေးလားလို့….
အတော်ရှည်သွားပြီမို့…အိပ်မက်ဆုံရာ သိပြီးသူများ …ခင့်လွှတ်…
PS- ရဲသွေးနောင်ကို တခါမှ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပါ..သိလည်း မသိပါ…. :smile:
နောက်ပွဲတွေဆို အသေအချာစောင့်ကြည့် အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါ နှင်းနှင်းရေ။ ကျမဖြတ်ခနဲပဲ ကြည့်ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ဆီကလူတွေကိုလည်း အဲ့လို မီးကုန်ယမ်းကုန်နဲ့ အားလုံးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်မဲ့သူတွေ ပေါ် ထွက်လာစေချင်တာ။
မနေ့ကမှ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ် ယူတုမှာ သူများတင်ထားတာ.
ဘီယွန်းဆေး ရဲ့ ဟေလိုကို ပြန်ဆိုထားတာ.
ဘာမှ မဟုတ်တော့ပါ ဝူးလေ.
အဆိုတော်တွေ(Season 3) မလာသေးပြန်ဘူး…မကြိုက်တဲ့ အဖွဲ့လိုက်လူရွေးပွဲ
တွေပဲ လာနေတယ်…မpooch ညွှန်းတဲ့ Superstar K-4 လည်း တွေ့မိသလိုပဲ…
သူတို့ကို အဆိုထက် အကတွေက ပိုကောင်းနေတယ်ထင်ပြီး စိတ်ကိုမ၀င်စားတာ..
မpooch အရေးကောင်းလို့ ဒီနေ့ ၂နာရီမှာ စောင့်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်….
ကို ၁၀ ..ငယ်လား၊ကြီးလားတော့ မသိ..ဘေးနားက ပုံထဲကအတိုင်းဆို
ကြောက်စရာကြီး….ကို၅၀ လားမသိ..ဒါဆို နော့ဦးလေးပဲ…ဒီမှာက
လိုရင်းက ကို၁၀ ဘာများပြောချင်တာပါလိမ့်..ကိုရဲသွေးနောင်ကိုတော့
…ချစ်ရှာလေး မဟုတ်လား..ရုပ်လေးကလည်း အသက်နဲ့စာရင် အတော်နု..
…ထင်တောင်မထင်ခဲ့ပါဘူး…ချစ်ရှာလေးထက် အလှမ်းကွာလို့ အသံကိုပဲ
ပိုကြိုက်တာပါ… :buu: :gee:
Halo မှာ ဘုမသိဘမသိ ထင်တာပြောရရင် ကိုရဲသွေးနောင် ဆိုတာက
Beyonce ထက် အတွန့်အရစ်တွေ ပိုများပြီး(ဒိုင်တွေအဆို ပညာသား
ပါတယ် ဆိုလား) out တို့ halo တို့နောက်က အသံ..အာ ၀ုဝု၀ုဝု၀ုဝု၀ုဝု
သံက တစ်ချက်တစ်ချက် ကျွံသွားပြီး များသွားသလားလို့….
ညည ဟိုအကောင် ဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်တဲ့အသံနဲ့အတော်တူသလိုပဲ
အလွန်နားထောင်လို့ (ကို၁၀ စကားဆက်ရရင်) တော့ ကောင်းပါတယ်ရှင်..
သူများတွေ ပြုံးလို့ရတယ်…အပြုံးဝါ၀ါလေး ပြုံးလို့မရတာ အတော်ကြာပြီ…
ဟော..ခု..သွားလည်း ဖြဲလို့မရတော့ဘူး….ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်…. :sad:
မpooch ရေ …testing :grin: :smile:
:shock: :eek: :sad: :cool: :mad:
အမှားပြင်ဆင်ချက်- ‘ဒဿ’ ကို ‘ဒဿမ’ ကြီးပဲ မြင်နေလို့ ကို၁၀ ဆိုပြီး
အလွယ်ရေးလိုက်တာ….ဟီး…’ဒဿ’ ဆိုတော့ ‘ဘီလူး’ ပေါ့..အဲဒါကြောင့်
ကြောက်စရာကြီး မြင်နေရတာ….း) …
အရီး လဲ သိပ်သိတယ်လို့ မဟုတ်။ ထင်တာ။
ဒဿ = တစ်ဆယ်
ဂီရိ = ဘီလူး
ဒဿဂီရိ = ခေါင်းဆယ်လုံး နဲ့ ဘီလူး
ဒဿဖွတ်ကျား= ခေါင်းဆယ်လုံး နဲ့ အကျား တွေရှိသော ဖွတ်
မှားရင် ပြောကြပါဦး။ :hee:
က ၁၀တန်းဆိုတော့ ငါတော့ မှားပြီလားဆိုပြီး ပြင်ရေးလိုက်ကာမှ
ဒဿ ဆိုတာ ဂီရိနဲ့တွဲလိုက်တော့ အမှန်ပဲ ခေါင်း၁၀လုံးနဲ့ ဘီလူးကြီး
စစ်စစ်ပဲ..လွဲပြီးရင် လွဲနေပြီ..၂ခုလုံး အမှန်ပဲ ထင်တယ်…
မpooch တော့ ပြောတော့မှာပဲ….ခွင့်လွှတ်ပါ မPooch ရေ…
အခုမှ ဖတ်မိသွားလို့ (ခုနစိတ်အိုက်သွားလို့အဆုံးထိမဖတ်လိုက်)
ဆိုလို့..ခိခိ… :-] …. နှင်းနှင်းက ကို၁၀ ဖွတ် + ကျား ၂ကောင်စပ်
သတ္တ၀ါဆိုပြီး တွေးမိနေလို့ပါ….း)….
အရီးလဲ မှားတယ် နှင်းနှင်း ရေ။
ဒဿဂီရိ = တောင်၁၀လုံး တို့ ၏ အရှင်သခင် ဆိုဘဲ။
ဒဿဖွတ်ကျား= ခပ်ကျားကျားဖွတ် ၁၀ကောင် ၏ အရှင်သခင်။
ဖွတ်ကျား ၁၀ကောင် ၏ ဘောစိ
ပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပေမယ့်.. စိတ်ဝင်စားသွားလို့.. လိုက်ဖတ်ထားတာလေး.. မှတ်တမ်းကျန်ရစ်အောင်ပါ..
ပိုစ့်ရှင်ရေ.. ဆောရီး..။ ဂိုမန်းနဆိုက်… :harr:
၀ိကီမှာ. ဒဿဂီရိလို့.. မြန်မာတွေပဲခေါ်ပုံရတယ်ပြထားသဗျ..
အဲဒီအကောင်က.. ခေါင်း၁၀လုံးတော့ ရှိနေတယ်..။
ဒီခေတ်မတော့.. ရုပ်ပြစားယုံနဲ့တင်.. မီလီယန်အသာလေးပဲ..
within the Hindu traditions, some of whom believe that his description asaten-headed person (Daśamukha or Daśagrīva) isareference to him possessingavery thorough knowledge over the4Vedas and6Upanishads, which made him as powerful as 10 scholars.
အားလုံးကို ခွင့်လွှတ် တယ် ။ စိတ်ရှိသလိုသာ ပြောကြပါ ။ သူကြီးက ကွန်းမန့်တွေကို မုန့်ဖိုးပေးလို့ပါ။
အရီးရေ…အဲဒါဆို ဂီရိက ‘တောင်’ ပေါ့နော်…ကိုkai ပေးထားတဲ့ link
၀င်ဖတ်ပေမယ့် စာက ပါဠိတွေနဲ့လေးနေလို့ မဖတ်တော့ဘူး..း) …
nine heads က nine emotions ဆိုတာပဲ မှတ်ခဲ့တယ်…..
မpooch ရေ အဲ့လိုလား.. မနေ့ကမှ တွေ့လိုက်တာ..6040 Kyats…
အဲဒါဘာပါလိမ့်ဆိုပြီး သိချင်နေတာ … သူများတွေ ၁၅ ကျပ်ပြောပြော
နေတာ နားမလည်လို့…ခုမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်…မီတာခလေး
ကာမိသွားအောင် ၃၅ကျပ် တိုးပေးရင်ပိုကောင်းမယ်နော်
မPooch ရေ.. ကြေးမုံကြီးကို(သတင်းစာ)ယုံစားမိလိုက်တာ မှားရော..း-(
..ဆုယူတော့လည်း ကိုရဲသွေးနောင်ပဲ မြင်လိုက်မိလို့ပါ…း)…
အဲ့မှာ ပ၊ဒု၊တဆုများမှာ ကျပ်ငါးသိန်း လို့ရေးထားပါတယ်…
အမှန်တော့ ပ-ဆုက ၁၀ သိန်း၊ဒု-ဆုက ၇သိန်း၊ တ-ဆုက ၅သိန်းပါလို့..
မမပုရ်ှရယ် မြန်မာပြည်မှာလည်းပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာတော့အုန်းအုန်းထနေတာပဲ. အခုအိမ်မက်ဆုံရာအစီအစဉ်လည်း season2 ဆိုမဆိုဘူးပြောရမှာပေါ့နော်. ဆုကြေးကတော့ သူများနဲ့ယှဉ် ရင်မဆိုစလောက်ပေါ့. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုရီးယားကားတွေရော သီချင်းတွေရော နားမထောင်ဖြစ် မကြည့်ဖြစ်ဘူး. တခါနှစ်ခါကြည့်ဖူးတယ်. ပါဖောမင့်စ်များပြီး အသံတွေက မပြည့်သလိုပဲ. ကိုယ်ကြည့်မိသလောက်ကိုပြောတာနော်. မမပုရ်ှပြောတဲ့ K-wave ကိုတော့မကြည့်ဖူးဘူး. ဘယ်လိုင်းကလာတာလဲ. K-pop Star ဆိုတာတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်. ဖိုင်နယ် ၅ယောက်မှာ အသံတည့်အောင်မဆိုနိုင်တဲ့သူပါတယ်. အမေရီကန်အိုင်ဒေါကိုတော့ကြိုက်ပေမယ့် ၃နှစ်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ဗုတ်တင်းစစ်စတမ်ကြောင့် ကိုယ်အားပေးတဲ့မိန်းကလေးတွေ ဒုတိယရပြီး မကြိုက်တဲ့လူတွေပဲ ပထမရသွားလုိ့
မမပုရ်ှရယ် မြန်မာပြည်မှာလည်းပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာတော့အုန်းအုန်းထနေတာပဲ. အခုအိမ်မက်ဆုံရာအစီအစဉ်လည်း season2 ဆိုမဆိုဘူးပြောရမှာပေါ့နော်. ဆုကြေးကတော့ သူများနဲ့ယှဉ် ရင်မဆိုစလောက်ပေါ့. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုရီးယားကားတွေရော သီချင်းတွေရော နားမထောင်ဖြစ် မကြည့်ဖြစ်ဘူး. တခါနှစ်ခါကြည့်ဖူးတယ်. ပါဖောမင့်စ်များပြီး အသံတွေက မပြည့်သလိုပဲ. ကိုယ်ကြည့်မိသလောက်ကိုပြောတာနော်. မမပုရ်ှပြောတဲ့ K-wave ကိုတော့မကြည့်ဖူးဘူး. ဘယ်လိုင်းကလာတာလဲ. K-pop Star ဆိုတာတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်. ဖိုင်နယ် ၅ယောက်မှာ အသံတည့်အောင်မဆိုနိုင်တဲ့သူပါတယ်. အမေရီကန်အိုင်ဒေါကိုတော့ကြိုက်ပေမယ့် ၃နှစ်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ဗုတ်တင်းစစ်စတမ်ကြောင့် ကိုယ်အားပေးတဲ့မိန်းကလေးတွေ ဒုတိယရပြီး မကြိုက်တဲ့လူတွေပဲ ပထမရသွားတယ်.
ခရစ်(စ်)ရေ ညီမလေး ကြည့်တဲ့ k-pop starhunt ဆိုတာ အရှေ့တောင် အာရှတခွင်က ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ ကို အခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ ရွေးချယ်ပြီး စင်တင်တာပါ။
၁၀ ယောက်ပဲ ရွေးပြီး ဒိုင်တွေက သူတို့ဆီက အပျော်တမ်းလောက်တောင် အဆင့်မမှီဘူးလို့ ရက်ရက်စက်စက် ပြောပြီး ကလေးတွေ မျက်ရည်တောက်တောက်ကျအောင် လေ့ကျင့်ပေးပြီးမှ ၁၀ ယောက်ထဲက ၁ ယောက်ကို ရွေးတာပါ။ မနှစ်က ယိုးဒယားက ကလေးမလေး ရသွားပါတယ်။ ကိုရီးယားတွေ ပြိုင်ရတဲ့ ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တခုက သူတို့ဆီက အဖွဲ့တိုင်းကို အမလည်း စိတ်တိုင်းမကျသလို မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အားနည်းချက်ကို အားသာချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး စနစ်တကျ ပိပိရိရိနဲ့ စင်တင်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားမိတာက အဲ့ဒါကိုပါ။ ဘာကြောင့် အောင်မြင်နေသလဲ ဆိုပြီးတော့။ သူတို့အောင်မြင်မှုကို စိတ်ဝင်စားလို့ တစေ့တစောင်း ကြည့်မိတာပါ။
အမေရိကန် Idol က အမရဲ့ ပထမဆုံး နှစ်သက်မှုပါ။ ညီမပြောသလို နောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားပါတယ်။ နောက်အကြောင်းတခုက အေရိုးစမစ်ရဲ့ ပါးစပ်ပြဲပြဲကြီးနဲ့ ပြောတာကြီးကိုလည်း မုန်းလို့ မကြည့်ဖြစ်တော့တာပါ။
အသံအား ပိုင်းမှာ အရည်အသွေးပိုင်းမှ အမေရိကန် Idol ကသာပါတယ်။ လုံးဝကို အသံအားကောင်းတဲ့သူတွေ များလှပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းမှာ Superstar K က ပိုအသက်ဝင်ပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဆီမှာလည်း ဒီလိုပွဲတွေ လုပ်ပေး ပြီး အနုပညာကို တခေတ်ဆန်းစေချင်တာပါ။
လုပ်နေတာလေးတွေ လည်း တွေ့ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အားကောင်းစေချင်တာပါ။ ကော်ပီ ဂီတလောကကို တခေတ်ဆန်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို ဖော်စေချင်တာပါ။
ကျန်သွားလို့ ညီမရေ tvN က လွှင့်ပါတယ်။ အမတို့ဆီမှာတော့ စကိုင်းနက်ကလွှင့်ပေးတဲ့ လိုင်းမှာ ပါပါတယ်။ သောကြာနေ့ နေ့ခင်း ၂ နာရီကျော်လောက်ဆို လာပါတယ်။ ည၁၀ နာရီမှာပြန်လာပါတယ်။ နောက်ရက်တွေ ကြုံသလို ပြန်လွှင့်တတ်ပါတယ်။
Aerosmith အဖွဲ့က စတီဗင် တိုင်လာ (Steven Tyler) ကို ပြောတယ်ထင်ပါ့
အန်တီပုခ်ျ…ခု သူ အိုက်ဒေါ မယ် ဒိုင်မလုပ်တော့ဘူး ထင်တယ်။
လူတိုင်း ဆိုနိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ သီချင်းကို ကောင်းကောင်းမဆိုတတ်တာ။
ဂီတ ဘက်မှာ ပါရမီ အတော်နည်းတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိတယ်။သီချင်းဆိုတာ
ဂစ်တာ တီးတာ ချပ်(ခ်ျ) မှာ တီးတဲ့ သူငယ်ချင်းဦးလေး ကရင်ကြီးတွေသင်ပေးတာ
ကို မတတ်နိုင်တာ။သူများတွေ အသီးသီး ဂစ်တာ ကောင်းကောင်းတီးတတ်..ဆိုတတ်
သွားတဲ့ အချိန် ကျွန်တော်က ဘာမှ (တကယ်ကို ဘာမှ) မဆိုနိုင် မတီးနိုင်တော့ ..ကိုင်း
ငါတော့ ဒီဘက်မယ် ပါရမီ အတော်နုံချာ သကိုး လို့ သဘောပိုက်မိတာနဲ့ အဆိုအတီးကို
စွန့်လွှတ်ပြီး သူများ ဆိုတီးတာပဲ နားထောင်တော့ပါကြောင်း။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဘလှိုင် စတီဗင် တိုင်လာပါ ။ သူ့ပါးစပ်ပြဲကြီးကို မြင်ရင် စိတ်ကုန်လို့ပါ။ ရုပ်မမြင်ပဲ ဆိုရင် သူ့သီချင်းတွေ ခံစားလို့ ရပါသေးတယ်။ သူ့သမီးက လှသလောက် သူက ဘာမှန်းမသိဘူး
ခုဒိုင်မလုပ်တော့ဘူး ထင်ပါတယ် ။ ကျမလည်း မကြည့်ဖြစ်တော့တာ ကြာပေါ့။
ကျမလည်း အထုံနည်းလှပါတယ်။ ဂီတဆိုတာ ကျမအတွက်တော့ နားထောင်ဖို့သက်သက်ပါပဲ ။
ဒါဆို ခေါင်းစဉ် ပြင်လိုက်ရမလားပဲ ။ Anyone can feel လို့
ကိတ် အာဗင် နဲ့
နစ်ကီ မီနာ့ဂ်ျ တို့ ဖြစ်သွားပါကြောင်း
ရန်ဒီဂျက်ဆင် ကြီးတော့ ပါနေသေးကြောင်း
ဂျေလို မရှိတော့လို့ လှည့်ကိုမကြည့်ဖြစ်တော့ကြောင်း.
အော်. သူလည်း တေးတေးလေး ဖစ်သွားပီမို့
အခု ဘီယွန်းဆေး ပြောင်း အားပေးနေကြောင်း
အ်ိုဘာမားသမ္မတဖြစ်တော့.. ကျမ်းကျိန်ပွံညမှာ.. ဘောလ်တခုမှာ.. ဘီယွန်းဆေးဆိုတာလေး.. သတိရမိတယ်..
သီချင်းလေးက ငြိမ့်နေတာပဲ.. ။ သီချင်းသွားနဲ့.. သမ္မတစုံတွဲကကြတယ်..မှတ်မိတယ်..။
Single Ladies လည်းကြိုက်တယ်..
သူတို့စုံတွဲက.. အိုဘားမားကို.. ၄သန်းထပ်ရှာပေးလိုက်သတဲ့…လေ..။
Beyonce, Jay-Z Raise $4 Million for Obama in New York – The …
1 day ago – The president tells crowd at Jay-Z’s 40/40 club: “Beyoncé couldn’t beabetter role model for our daughters.”
everybody looking for somethin !
something ကို စာလုံးပေါင်းရမှာ g တလုံး ကျန်ခဲ့ပါတယ် အဘပေ။ everybody ရဲ့ နောက်မှာလည်း အကူကြိယာဖြစ်တဲ့ is က ပါမလာပြန်ပါဘူး။ အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ မျက်လုံးလေးလည်း ဂရုစိုက်ပါအုန်း။
ဟုတ်ပါတယ် အဘပေ လူတိုင်းဟာ တစုံတခုကို အမြဲရှာဖွေနေကြတာပါ။
ဒါတွေနဲ့  မနီးစပ်တာတောင်ကြာပေါ့ 
ဒေါ်ပုခ်ျ ရေးတင်မှပဲ ကြည့် ချင်စိတ်ပေါက်သွားတော့ တယ်
ခက်တာက ကြည့် ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး
ဦးစားပေးတွေများနေလို့ လေ ။
ဂီတကိုနှစ်သက်ပေမဲ့  ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်စာဖတ်တာကိုပိုအားသန်တာ
ကိုဆာမိရေ ကျမလည်း တထိုင်ထဲ ကြည့်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့ ၃ ခါလောက်လွှင့်တော့ မနက်တပိုင်းလောက် မြင်မိလိုက် နောက်ရက်မှာ ညတပိုင်းလောက်တွေ့လိုက် စုံသွားတာပါ။ တထိုင်ထဲတော့ မကြည့်အားပါဘူး။
ကျမက စာဖတ်တာကို ကြိုက်သလို စိတ်ခွန်အားကို ပေးတဲ့ show တွေကိုလည်း နှစ်သက်တာမို့ ညီမတွေ ညွှန်းတာနဲ့ ကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ။
လာမည့် ပြာသိုလ ညချမ်းချိန်ခါတွင် C Wave သေချာပေါက်လာမည်..မျှော်….
(နမူနာ – မီညောင် ခွီးဂရား)
ဦးကြောင်ရေ C wave မလာခင် အန်တီဝေ့အိမ်မှာ သွားပစ်ထားတဲ့ ကလေး ၅ ကောင်ကို စရိတ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့အုန်း
လူငယ်တွေရဲ့ ၀ါသနာတွေ ပါရမီတွေ အိမ်မက်တွေ မျှော်လင့်ခြင်းတွေက်ို
ကိုကမ်း စကား ငှားပြောရရင်တော့..
အဲ့ မိန်းမဂျီး လုပ်လို့ စားကာနီးသောက်ကာနီး
အူးဖွတ်ကျားရေ Green wash လုပ်တဲ့ကိစ္စကို တို့တွေ ဆင်ခြင်နေတာကြာပေါ့။ ညည်းပြောတဲ့ brain wash မဖြစ်အောင်ပေါ့။
အစိမ်းရောင်မှာ ပြစ်ချက်ရှိတာနဲ့ သူပြောတာတွေ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြောလို့မှ မရတာ။ ယူသင့်တာကို ယူရမှာပဲလေ။
သူပြောချင်တဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ လူတိုင်းကို ကိုယ်သန်ရာမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတဲ့ အနေအထားကို ဆိုချင်တာပါ။
ဟိုနေ့က ကိုကမ်း နောက်သွားတာလေး သွားသတိရလို့ပါဗျာ…
သူကြံသမျှ အာပျိုရီး ဖြစ်ကုန်တယ် ထင်ပါ့… ဟီဟိ…
အင်းပေါ့လေ ပြောစရာ ပြစ်ချက်ကြီးကြီးမားမား မရှိတော့ မရှိရှိတာလေးကို ပဲ ရှာကြံပြောနေကြတာဆိုတော့လည်း ခွေး
ဒီစာသားက ဒီနှစ်ထိပဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ ပါးစပ်ပိတ်သွားစေရမယ် ဟီး
” အဲ့ မိန်းမဂျီး လုပ်လို့ စားကာနီးသောက်ကာနီး
ပြုတ်ပြုတ်ကျတာ ခနခန… ”
တစ်ချက် ဝင်ပြောကြည့်မယ်နော် ။
အဘ အထင် ၊ ဂီဂီ ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက ၊
ဂျူး ရဲ့ မိန်းမဝါဒီ ဆန်ဆန် အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ၊
ယောက်ျား မယူ ၊ ယောက်ျား အထင်မကြီး ၊ ယောက်ျား မုန်းတဲ့ ၊
( များသောအားဖြင့် ပညာတတ် အရည်အချင်းရှိ ) မိန်းမ အချို့ ရှိခဲ့ပြီး ၊
ဂီဂီလေး ခမျာ အဲဒီလို အမျိုးသမီးတွေနှင့် မကြာခဏ တွေ့ခဲ့ပြီး ၊
လိုရင်း မရောက် ( မ ဝါး ) ခဲ့ရတာတွေကို ပြောချင်တာဖြစ်မယ် ။
သီချင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ကမ္ဘာမကြေတောင် နားထောင်ကောင်းအောင် မဆိုတတ်ဘူး
ဒေါ်ပု အရေးအသားကြောင့် Superstar K ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရရင်တောင် အဲဒီလို စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး
ပါရမီ ပါသူများကြတော့လဲ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်တာပဲ
ဒီနေ့ ခေါင်မိုးနဲ့ ခေါင်းနဲ့ တက်ဆောင့်လို့ ဘုထရင် ကိုနိုဇိုမိ ပရောဂမကင်းပါဘူး။ အပျော်လေး ရေးတာပါ။
အဲ့လိုကြီး နောက်ပါနဲ့ ။ အန်းနီးဝေး သိုင်းကျုးပါ။
နိုင်ငံခြား channel တွေကို ကြည့်မိရင် စွဲပြီး အမြဲကြည့်ချင်နေလို့ ဘာကိုမှမကြည့်ပဲ အဆက်ဖြတ်ထားတာကြာပြီ … အရင်တုန်းကတော့ တရုတ်ပြည်ဘက်ကလိုင်းတွေကို အမြဲအားပေးဖြစ်တယ် … သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေကို ကြိုက်တယ် … အစကနေ အဆုံးအထိ အမြဲမပြတ်အားပေးပြီး မချင့်မရဲဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ် …
快乐男声, 快乐女声 အစီအစဉ်တွေက american Idol လိုမျိုး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာသာမက ကမ္ဘာ့အဆင့်အထိ ပြိုင်ပွဲလုပ်ကြတယ်။ ဂီတကို အရမ်းအားပေးကြတာတွေ့ရတယ် …
မြန်မာပြည်မှာ အခုလုပ်နေတဲ့ အိမ်မက်ဆုံရာကတော့ သူတို့အဆင့်မှီဖို့ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ် လောက်တော့ အနဲဆုံးလိုအုန်းမယ် …
မဝေရေ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတယ်လေ ဒါကြောင့် ကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ။ လူနုံး စိတ်နုံး
ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မို့ စိတ်ကိုပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်စေတာမို့ ပါ။
အမပုရေးတင်လို့သာသိရတာ။ အိမ်မှာ အင်တင်နာမထောင်ဘဲ သရဲကားတွေ အားပါးတရ ထိုင်ကြည့်နေတာနှစ်ချို့ဘီဆိုတော့လေ။ တီဗီအစီအစဉ် စလောင်းအစီအစဉ် ဘာဆိုဘာမှ မသိတော့တာ ကြာပါဘီလေ။ သိတဲ့လူများ ဂလိုလေး မျက်စိဖွင့် နားဖွင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။ Gangnam Style ကိုတော့ သူငယ်ချင်းယူလာပြလို့ကြည့်ရတယ်။ ကတာမိုက်တယ်ဗျ။
ရွှေအိရေ မြန်မာလို ပေါက်ကရရေးထားတဲ့ စာသားက ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။ အတော်လေးကို ဟာသမြောက်တယ်။ တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ။
ရွှေအိလည်း သူရဲကား ကြိုက်တယ်လား ။ မီထူးပါ။ နောက်ကြုံရင် ပြောရအောင်လေ။
အမပု သေချာတင်ပြပေးထားတာပဲ ……. ခေတ်မှီတယ်ဗျို့ ….. ညီမကတော့ နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေ အဆိုတော်တွေဆိုဘယ်သူ့ကိုမှ မသိဘူး ……….
ခိုင်ခိုင်ရေ အမကြိုက်တဲ့ ဆယ်လီဗျစ်တီတွေအကြောင်းကိုပါ ထည့်လိုက်ရင် အဖဲ့ခံရမှာ စိုးလို့ ဒီလောက်နဲ့ တော်လိုက်တာပါ။ သိတယ်မလား ဖားတွေ ဖွတ်တွေက လွယ်တာမဟုတ်ဖူး
ဘယ် channel က လာတာလဲဟင် မမပုခ် :hee:
စကိုင်းနက်က လွှင့်တဲ့ tvN မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် တိုက်တိုက်။
ကြုတ်လဲ နေညိုရင် ထန်းတောကြီးကို လွမ်းတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ဝင်ပြိုင်ဦးမယ်
ဆုရလို့ဒေါ်လှ ငါးသိန်းရရင် ဘီအီး ဆိုင်ဖွင့်မယ် စတူဒီယိုထောင်မယ် စတိတ်ဆောက်မယ်
ကြုတ်က အကဲဖြတ်ချင်သလိုဖြတ်မယ်..ဘီအီးတစ်လုံး စုချမယ်
ဘီဝေ့ဖ် ဆိုပြီး ဘီအီးငမူးတွေရဲ့ ဗိုကယ်လ်ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ ဆိုတာ ကဘာက သိသွားစေရမယ်.
အဆင်ပြေရင် ဘီဝေ့ဖ် အပြင် ၀ီစကီဝေ့ဖ် ၊ ၀ိုင်ဝေ့ဖ် ၊ ထန်းဝေ့ဖ် ၊ ဘီယာဝေ့ဖ် ဆိုပြီး လုပ်ငန်းကို ချဲ့ ထွင်သွားမယ်..
အကျိုးတူ ပူးပေါင်းချင်တဲ့လူတွေ သံချောင်း ဘီအီးဆိုင်ကို နေမညိုခင် အရောက်လာပြီး ရှယ်ရာ လာထည့်နိုင်ပါဂျောင်း။
ဗိုက်ဗိုက်ရယ် နင့်စာဖတ်ပြီး မပြိုင်ရသေးဘူး ဘီဘီနံ့တွေ လှိုင်ပြီး ဖတ်ရုံနဲ့တင် မူးသွားပါတယ်။
အော် .. ဒါကြောင့်
ဟိုထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့လူဂျီး အိမ်ကို လှည့်ပြန်ခဲ့ရဒါကိုး ..
ဒိုင်တွေကလည်းဗျာ အဲ့လူ ဂျီးကို အကျပေးပြီး အိမ်ပြန်လွှတ်ရတယ်လို့ …
“Anyone can sing” ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုမြင်ပြီး
“Anyone can cook” ဆိုတဲ့ ဟိုကြွက်ကာတွန်းကားလေးကို
ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် သွားတွေးမိလိုက်ပါရဲ့ ဂျီးဒေါ်ရယ် …
ကျုပ်လည်း အဲ့ပြိုင်ပွဲ သွားပြိုင်ဦးမှ ..
စိန်ဗိုက်က နေညိုရင် ထန်းတောကြီး လွမ်းတယ် ဆိုတော့ …
ကျုပ်ကလည်း အားကျမခံ မာမီရယ် ရှာပေးကွယ် .. ဆိုတဲ့ သီချင်းတဲ့ သွားပြိုင်မယ်ဂျာ ..
အော် သူငယ်အံလည်း Ratatouille ကာတွန်းကားလေးကို ကြိုက်တယ်ပေါ့။ စားဖိုမှူးကြီး ဂူစတို ပြောတဲ့စကားလေးက ” anyone can cook ” တဲ့လေ။ ကျမလည်း အဲ့ဒီ စကားကို သဘောကျလို့ အတိအကျကို လိုက်သုံးပြီး ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ။ မလွဲပါဘူးရှင်။
ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် မဟုတ်ပါဘူး။ အတိအကျပါ။ ခေါင်းစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စဉ်းစားရင်း ဟင်းချက်ခန်းပါ ရောက်သွားမှာ စိုးလို့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကြိုက်လွန်းလို့ အခါခါကြည့်လည်း ဘယ်တော့မှ မရိုးတဲ့ ကာတွန်းလေးပါ။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် အသစ်ထွက်တဲ့ ထဲက Tin Tin ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးလည်း ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ အားတဲ့အခါ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ။
ရီရတယ်ဆိုရင်တော့ သဘောကျပါတယ်.. :harr:
ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ပျော်အောင် စာတွေ များများ ရေးတင်ပေးပါ ဦးမိုက်။ ဦးမိုက်အသံလည်း ကြုံရင် တွေ့ဆုံပွဲမှာ နားထောင်ချင်ပါသေးတယ်။ အားမငယ်ပါနဲ့ ။ ပန်းကုံးတွေ ဘာတွေ စွပ်ပြီးကို အားပေးမှာပါ
ဒေါ်ဒေါ်က ကိုဆာမိလိုပဲ နည်းလှတဲ့အချိန်ကို ဂီတထက် စာဖတ်ဖို့ ပိုပေးချင်တာကြောင့် အလှမ်းနည်းနည်းဝေးနေတယ်။
ကိုရီးယားတွေရဲ့ ဇွဲကိုလည်း သိလာရပါတယ်။
အိပ်မက်ဆုံရာ ၁ ကိုတော့ မျက်စိအနားစိတ်အနားပေးရင်း နောက်ဆုံးရက်တွေကြည့်ဖူးတယ်။
ဒိုင်လုပ်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်းလေးရဲ့ အပြောအဆိုလေးတွေ ကြိုက်မိပါတယ်။
၁၀ ဆိုတဲ့ ဒသ ကို မနှစ်ကထိ ဒေါ်ဒေါ်လည်း ဒဿ လို့ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်။
နာမည်ပိုင်ရှင် ကတော့ သူ့မယ်တော်ကို နာမည်ဖျက်နေပြီ။(jk နော်။သူခုတလော ကျွဲမြီးတိုနေလားလို့ ကြိုချော့ထားရတာ)
ဒေါ်ဒေါ်ရေ ဟိုရက်က ခရီးသွားနေလို့ ခုမှ ပြန်ကြည့်မိလို့ စာပြန်နောက်ကျနေတာပါ။
ကျမက အိမ်မက်ဆုံရာကို တခါမှ ကောင်းကောင်းမကြည့်ဖူးဘူးဒေါ်ဒေါ်ရေ ။ ဒီတခါ မှတ်မှတ်ရရ အားပေးမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။
စကိုင်းနက်က လွှင့်တဲ့ tvN မှာ လာတာဆိုတော့ ခုရက်ပိုင်း အကြိတ်အနယ်ပါ ။ ကြုံရင် ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ ဒေါ်ဒေါ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကြည့်လိုက်ရသဗျ..
လူရွေးပွဲမှာတင် အတော့်ကိုဇကာစစ်နေသကိုး..
တဦးချင်းစီ အသံစစ်ပီးအောင်လာတဲ့ သူတွေကို..
အဖွဲ့လေးတွေ ဖွဲ့ပေးပီး teamwork နဲ့အသားကျအောင်.
စီစဉ်ထားမှုက အစ အသေးစိတ်ရိုက်ပြထားသဗျာ..
အင်မတန် စိတ်လှုပ်ရှား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလွန်းလို့..
ညွှန်းပေးတဲ့ ဒေါ်ပုခ်ျ ကိုကျေးကျေးကြီးပါ နော့…
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း သီချင်းတပုဒ်ဖြောင့်အောင်ဆိုတတ်ဘူးရယ်..
ဟုတ်တယ် ကိုအမတ်ရေ ဒီရက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းလူစစ်လာလိုက်တာ ၂၆ ပဲ ကျန်တော့တယ်။ မနက်ဖြန်လာမဲ့ အပိုင်း ပိုကြည့်ကောင်းမယ်။
ကျမသဘောကျတာကလည်း ပုံသဏ္ဍာန် မတူ လိုင်းမတူတဲ့ အဖွဲ့တွေ လူတွေကို ပေါင်းပြီး Teamwork ကို တထိုင်တည်း ဖန်တီးခိုင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ စနစ်ကို သဘောကျသလို မရရအောင် ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ သူတို့ ရည်အချင်းကိုလည်း အထင်ကြီးအားကျမိတယ်။
ခုအဆင့်ရောက်လာတဲ့သူတော်တော်များများဟာ ဆုမရကြပေမဲ့ အေဂျင်စီတွေတော်တော်များများက လာခေါ်သွားပြီး စာချူပ် ချူပ်လေ့ရှိတာမို့ ဒီအဆင့်ရောက်တာနဲ့ နောက်ခြေလှမ်းသစ်တခုကို စတင်နိုင်တာမျိုးပါ။
ကိုအမတ်ရေ ကိုယ်တိုင် မဆိုတတ်ရင်လည်း ဆိုပြီး ချော့သိပ်နိုင်မဲ့သူကို တွေ့ပါစေရှင်
တီဗီ စီးရီး တစ်ခု ကို သတင်းသဘော ပြောရင်း ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးထားတဲ့ Post လေးပါ။
သတင်း အဖြစ်တင်မကဘဲ စာရေးသူ ရဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက် အပြင် အဲဒီက ရရှိနိုင်တဲ့ အတုယူဖွယ် အကြောင်းလေးကို ပါ ထည့်သွင်းပြောခဲ့ တာမို့ နှစ်ခြိုက် မိတဲ့အတွက် ရွေးပါတယ်။
မဖြစ်ညစ်ကျယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအပျော်ရေးတဲ့စာကို တခုတ်တရ ရွေးပေးတဲ့သူများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ အရီး။